नेपालका लागि जीआईएस सिस्टम धेरै नै उपयोगी छ - Karobar National Economic Daily
नेपालका लागि जीआईएस सिस्टम धेरै नै उपयोगी छ
query_builderApril 20, 2017 10:55 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility1813
अग्रेन्द्र कुमार अध्यक्ष, ईएसआरआई इन्डिया
सूचना–प्रविधिका क्षेत्रमा २५ वर्षदेखि कार्यरत अग्रेन्द्र कुमार ईएसआरआई (इन्भायरोमेन्ट रिसर्च इन्स्टिच्युट) इन्डियाका अध्यक्ष छन् । व्यवस्थापकीय दक्षतामा अब्बल अग्रेन्द्रले विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको देशीय प्रमुखका रूपमा काम गरिसकेका छन् ।
पछिल्लो पटक उनी एसजीआई कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक थिए । विभिन्न राष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा कुशल भूमिका निर्वाह गरिसकेका उनी सूचना–प्रविधि क्षेत्र नै आफ्नो मुख्य पेसा भएको र यसमै आफू लागिरहने बताउँछन् ।
ईएसआरआई जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टम (जीआईईए) र लोकेसन एनालाइटिक्समा विश्वमै नेतृत्वदायी कम्पनीका रूपमा स्थापित छ । यो कम्पनी १ सय ३० भन्दा धेरै देशमा आफ्नो उपस्थिति दर्साउन सफल भएको छ ।
पूर्वाधार, विपद् व्यवस्थापन, सूचना–प्रविधि, सहरी यातायात तथा प्रकृतिक स्रोतहरूको सम्बन्धमा ईएसआरआईले सेवा दिँदै आएको छ । कम्पनीको मुख्य उद्देश्य जीआईएस प्रविधिको प्रयोग गरी आर्थिक, सामाजिक तथा भौगोलिक रूपमा सहजता कायम गराउनु हो ।
जीआईएस सिस्टमको प्रयोग बढाउने लक्ष्यका साथ ‘युजर कन्फरेन्सको’ प्रमुख वक्ताका रूपमा अग्रेन्द्र नेपाल आएका छन् । युजर कम्फरेन्स, जीआईएस सिस्टम र यसको प्रयोग, तथा सम्भावनाका बारेमा कारोबारकर्मी सरस्वती ढकाल र किरण आचार्यले गरेको कुराकानी :
सामान्यतया जीआई सिस्टम भनेको के हो ? यसले कसरी काम गर्छ ?
जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टम (जीआईईए) भनेको म्यापिङ हो । हामीहरू विश्वको जुनसुकै कुनामा भए पनि सबै जना म्यापभित्र छौं, जुन म्यापबाट विभिन्न किसिमका सूचनाहरू पाउन सकिन्छ ।
यो भनेको मोबाइल तथा ल्यापटप प्रयोगकर्ताले गुगल म्याप प्रयोग गरेजस्तो हो । हामीले यसको सहायताबाट सपिङ, रेस्टुराँ, स्कुल, रेजिडेन्सल, हाइवे, इलेक्ट्रिसिटी, फरेस्ट, रिभर, टेलिकम्युनिकेसनलगायत विभिन्न क्षेत्रका बारेमा जानकारी पाउन सक्छौँ ।
यति मात्र होइन, राष्ट्रिय स्तरबाट हेर्ने हो भने राष्ट्रको इलेक्ट्रिसिटी लाइन, टेलिकम्युनिकेसन टावर, अस्पताल, वन, नदी, पानीलगायतका सुविधाकोे जानकारी सहजै पाउन सकिन्छ । जस्तै, विद्युत्को कुरा गर्ने हो भने कति ट्रान्सफर्मर छन्, विद्युत्को क्षमता कति छ, पोल तथा ट्रासमिसन लाइनहरू कति छन् भन्नेदेखि प्रयोगकर्तासम्मको अवस्थासम्म यस प्रणालीबाट देख्न सकिन्छ ।
एउटै सिस्टममा बसेर सम्पूर्ण जानकारी सहज ढंगले पाउन सक्नु नै जीआईएस प्रणाली हो । साथै, यस सिस्टममा तथ्यांकहरू समयसापेक्ष अद्यावधिक गरिने भएकाले सेवाग्राही विश्वस्त हुन सक्छन् । अहिलेको समय भनेको विभिन्न ठाउँको जानकारी सबै किसिमका सुविधा एकै ठाउँबाट थाहा पाउने अवस्था हो । यसबाट सूचना–प्रविधिमा दख्खल हुने र प्रयोग गर्नेले अत्यधिक फाइदा लिन सक्छ ।
त्यस्तै गरी सरकार, व्यावसायिक संस्थादेखि सामाजिक काममा लागेका संस्थालाई जीआईएस सिस्टमले सहज बनाएको छ । हाम्रो कम्पनीले तयार गरेको म्याप सिस्टमले विशेष गरेर व्यापारिक कम्पनीहरूलाई सहयोग गर्छ । यही म्यापको सहयोगले उनीहरूले धेरै लाभ लिन सक्छन् ।
नेपालजस्तो भौगोलिक विविधता भएको देशमा सबै क्षेत्रलाई जीआईएस सिस्टमभित्र राख्न सकिएला त ?
नेपाललाई जीआईएस सिस्टमभित्र राख्न अवश्य सकिन्छ । हाल नेपालमा यो सेवा प्रयोग गर्ने संस्थाहरूको संख्या दिन–प्रतिदिन बढ्दो छ । जमिनको प्रयोग, प्राकृतिक सम्पदा, सहरी आवास, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विषयमा जानकारी लिने प्रयोगकर्ताहरूको संख्या बढिरहेको छ । समाजमा हुने विभिन्न किसिमका प्रकोपको व्यवस्थापन गर्नसमेत यसले सहयोग गरेको छ ।
यो सेवा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । राज्यले सबै क्षेत्रमा जीआईएसको प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले यसको फाइदाको विषयमा जानकारी गराउने उद्देश्यले ‘युजर सम्मेलन’ गरिएको हो । हालसम्म नेपालमा यो सेवा प्रयोग गर्ने संस्था वा व्यक्तिहरूले राम्रो प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रतिक्रिया हेर्दा छिटै नेपालको सबै भूभागलाई म्यापमा समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
ईएसआरआईका ‘युजर’ कति छन् ?
विश्वभर ईएसआरआईका उपभोक्ता ३ लाख ५० हजार छन् । २ सयभन्दा बढी अमेरिकी कम्पनीले ईएसआरआईको सेवा लिइरहेका छन् । ईएसआरआईका एप्लिकेसनहरू १० औं लाख डेक्स्टप तथा हजारौं वेबमा छन् । कम्पनीले ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट सम्बन्धमा आएका ५ हजारभन्दा बढी आवेदकलाई सेवा उपलब्ध गराइसकेको छ ।
यसअन्तर्गत पूर्वाधार, विपद् व्यवस्थापन, सूचना–प्रविधि, सहरी यातायात तथा प्राकृतिक स्रोतहरूको सेवा रहेका छन् । हाम्रा युजरहरू दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएका छन् । सरकार, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, गैरसरकारी संस्था, विदेशी नियोगहरूले जीआईएस प्रयोगलाई बढावा दिएका छन् ।
नेपालमा जीआईएसको प्रयोग कस्तो पाउनुभएको छ ?
नेपालमा करिब सयभन्दा बढी संघसंस्थाले यसको प्रयोग गर्दै आएका छन् । सरकार, सरकारी संस्था, गैरसरकारी संस्था तथा निजी कम्पनीहरूले जीआईएस सिस्टमको प्रयोग गरेका छन् । सरकार, इसिमोड, यूएनडीपी ठूला प्रयोगकर्ता हुन् । समाजकल्याण, व्यावसायिक काम, प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनमा जीआईएस सिस्टमको प्रयोग बढ्दो छ ।
नेपाल सूचना–प्रविधिको प्रयोगमा ‘एग्रेसिव’ देखिएको छ । यसले भोलिका दिनमा जीआईएस सिस्टम प्रयोग गर्नेको संख्या एकदमै बढ्छ भन्ने विश्वास बढेको छ । अटोमेसनमा जान चाहने सरकारका लागि यो महŒवपूर्ण माध्यम हुन आउँछ ।
जीआईएस प्रोडक्ट हो या कम्पोनेन्ट ?
यो आफैंमा प्रोडक्ट तथा प्रविधि होे । यसलाई हामीले छुट्टै प्रविधिका रूपमा पनि लिएका छौँ । हाम्रो कम्पनी ईएसआरआई १९६९ मा स्थापना भएको हो । ईएसआरआई जीआईएस सिस्टमको पायोनियर हो । यो कम्पनी हाल विश्वभर नै सञ्चालित छ ।
तपाईं विगत २५ वर्षदेखि आईटी सोलुसन्सको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहनुभएको छ । जीआईएस सिस्टमलाई कसरी बिजनेस र युजर प्mेन्ड्ली बनाएर लैजाने तयारी गर्नुभएको छ ?
जीआईएस सिस्टम युजर्स फ्रेन्ड्ली धेरै नै छ । यदि प्रविधि युजर्स फ्रेन्ड्ली बनाइएन भने त्यसको फाइदा ग्राहकले लिन सक्दैनन्, जसको असर कम्पनीलाई पर्छ । अहिलेको समयमा प्रविधिहरू युजर्स फ्रेन्ड्ली हुनु अत्यन्तै जरुरी हुन्छ । कम्पनीको लक्ष्य भनेकै जतिसक्यो धेरै युजर फ्रेन्ड्ली बनाउनु हो ।
हामीले बनाएको प्रोडक्ट युजरले मन पराएनन् भने प्रोडक्ट बनाउनु या नबनाउनुको कुनै अर्थ हुँदैन । त्यसैले हामीले समय–समयमा प्रोडक्ट युजर फ्रेन्ड्ली छ÷छैन, के सुधार गर्नुपर्छ भनेर सर्भे, अनुसन्धान र अध्ययन गर्दै आएका छाँै । युजरहरूको फिडब्याक हाम्रो हौसला हो । जीआईएस सिस्टम वेबबाट चल्छ ।
यो कम्प्युटर, मोबाइलबाट सजिलै चलाउन सकिन्छ । जीआईएस निकै सजिलो सिस्टम हो, यसको प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छ । यसको एप्लिकेसन चलाउन पनि सजिलो छ । विन्डोज, एन्ड्रोइड, आईओएसलगायतका अपरेटिङ सिस्टम भएका डिभाइसहरूबाट यसको प्रयोग सजिलै गर्न सकिन्छ ।
तपार्इंले जीआईएस सिस्टम अटोमेसनको मुख्य टुल हो भन्नुभयो । यस सन्दर्भमा देशको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा कस्तो भूमिका देख्नुहुन्छ ?
हाम्रो कम्पनी असाधारण कम्पनीका रूपमा परिचित छ । केही वर्षअघि अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले अमेरिकाका विद्यालयहरूमा निःशुल्क सफ्टवेयर प्रदान गरेका थिए । हामीले पनि डब्लूएचओ, यूएनजस्ता संस्थाहरूलाई एकदमै न्यून शुल्कमा यो सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छौँँ, जसले गर्दा सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने यस्ता संस्थाहरूलाई निकै फाइदा पुग्ने देखिन्छ । त्यसै गरी हामीले शैक्षिक संस्था तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा सकेजति कम शुल्कमा सेवा उपलब्ध गराएका छौं ।
सर्वसाधारणले भने यो सेवा लिएको एक महिनासम्म निःशुल्क प्रयोग गर्न पाउँछन् । सर्वसाधारणका लागिसमेत सस्तो शुल्कमा यो सेवा उपलब्ध छ । व्यक्तिगत लाइसेन्स लिनेहरूका लागि एक वर्षको ५ हजार भारतीय रुपैंया लाग्छ ।
नेपालमा सन् २०१५ मा गएको विनाशकारी भूकम्पमा समेत यो सिस्टमले धेरै सहयोग गरेको थियो । सहयोगमा खटेका देशी तथा विदेशीहरूले जीआईएस सिस्टमलाई आधार बनाएर धेरैको उद्धार गरेका थिए । यो सिस्टमको सहायताबाट मानिसको अवस्था थाहा पाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यो सिस्टमले मलेसियाली प्लेन दुर्घटनामा परेको समयमा घाइतेहरूको उद्घार गर्नसमेत सहयोग गरेको थियो ।
केही समयअगाडि भारतमा सुनामी जाँदा धेरै मानिसले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । त्यसैले भारत सरकारले सुनामी, भूकम्प आउनु अघि सूचना दिने गरी विभिन्न ठाउँको पहिचान गर्न धेरै खर्चसमेत गरेको छ । यस्ता कार्यमा हाम्रो सिस्टम उपयोगी बनेको छ । साथै, भारतलगायत विभिन्न देशका सरकारी संस्थाहरूले पोलियो रोगी डाटा संकलन गर्न, उपचार पाए–नपाएको थाहा पाउन यो सिस्टमको प्रयोग गरेका छन् ।
त्यसै गरी वनजंगल, नदीनाला, वन्यजन्तुहरूको जानकारी थाहा पाउन यो सिस्टम प्रयोग हुँदै आएको छ । देशको सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा यो सिस्टम कति उपयोगी छ भन्ने यसैबाट पुष्टि हुन्छ ।
नेपाल सरकारले सरकारी काममा अटोमेसन सिस्टम लागू गर्दै आएको छ, यस अभियानलाई जीआईएस सिस्टमले कसरी सहयोग गर्छ ?
नेपालमा साक्षरतादर एकदमै राम्रो छ । मैले यहाँको अटोमेसन पार्टको प्रयोगबारे धेरै बुझेको छैन, तर पनि यहाँ शिक्षाको क्षेत्रमा यो सिस्टम लैजान सकिने धेरै सम्भावना देखेको छु । किनकि यहाँका गाउँगाउँमा विद्यालयसमेत छैनन् । यो प्रविधिबाट कुनै पनि क्षेत्रको जानकारी लिन सकिन्छ । जनसंख्याका बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिन सकिन्छ ।
कति वर्षदेखि कति वर्षसम्मका मानिसको संख्या कति छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ । साथै कति स्कुल छन्, कस्ता खालका विषय पढाइ भइरहेका छन् र त्यसमा कति महिला तथा पुरुष छन् भन्ने जानकारी पाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि भारतको राजस्थानलाई लिन सकिन्छ जहाँ साक्षरता दर धेरै कम छ ।
हाम्रो सिस्टमले विश्वका कुनै पनि व्यक्तिले त्यहाँ कति स्कुल छन्, तिनमा कति विद्यार्थी छन्, कति शिक्षक–शिक्षिका छन् र ती स्कुलले कस्तो खालको शिक्षा प्रदान गरेका छन् भन्ने सम्पूर्ण जानकारी दिन्छ । यसले गर्दा विश्वका कुनै पनि व्यक्तिले राजस्थानको शिक्षा तथा विद्यालयको स्थिति थाहा पाउन सकिन्छ ।
त्यसैगरी यो सिस्टमले नेपालमा शिक्षाको स्थिति थाहा पाउन र त्यसलाई सुधार गर्न सहयोग गर्छ । पर्यटनको विकास तथा विस्तारमा पनि यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । जीआईएस सिस्टमबाट पर्यटकहरूलाई जानकारी, सूचना तथा ठाउँको तस्बिरहरूसमेत उपलब्ध गराउन सकिन्छ । जीआईएसको काम अटोमेसनमा सहयोग गर्नु नै हो ।
जीआईएस सिस्टममा डाटा अत्यन्तै महवपूर्ण हुन्छ । नेपालमा तथ्यांक संकलनमा के–कस्ता समस्या देख्नुहुन्छ ?
नेपालमा मात्र होइन, धेरै राष्ट्रमा डाटा संकलन अत्यन्तै चुनैतीपूर्ण छ । तर, पहिलो उपाय भनेको यहाँको सरकारी केन्द्रीय तथ्यांक विभाग नै हो । यहाँबाट विभिन्न किसिमका तथ्यांक संकलन गर्न सकिन्छ ।
यसबाहेक ड्रोन पनि तथ्यांक संकलनको महŒवपूर्ण उपकरण हो । यसका साथै अन्य सरकारी विभागहरूबाट विभिन्न किसिमका तथ्यांकहरू संकलन गर्न सकिन्छ । हाम्रो सबभन्दा पहिलो चुनौती भनेको नयाँ तथ्यांकहरू पत्ता लगाउनु नै हो । सरकारको केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई आधार मानेर नेपालमा काम गर्नेछौँ ।
त्यसका लागि हामीले अन्य व्यवस्थाहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्य व्यवस्था भन्नाले प्राइभेट संघ–संस्था, विभिन्न संगठनहरूले प्रयोग गरेका तथ्यांकहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, हामीले सरकारी तथ्यांकलाई नै आधार मान्दै आएका छौँ ।
जीआईएस सिस्टममा समावेश भएका डाटा विश्वसनीय छन् भन्ने आधार के हो ?
हाम्रो डाटाको स्रोत सरकारी तथ्यांक नै हो । देशको सरकारी तथ्यांकलाई नै विश्वास गर्न सकिन्न भने अरू कुन संस्थालाई विश्वास गर्ने ? त्यसैले हाम्रो विश्वास भनेको सरकार र सरकारी तथ्यांक हुन् ।
यसका लागि समयसापेक्ष अपडेट गर्न हाम्रा कर्मचारी खटिएका हुन्छन् । जुनसुकै देशले पनि डाटा अद्यावधिक राख्ने भएकाले मलाई लाग्छ, विश्वसनीय नै हुन्छन् । नेपालको हकमा केन्द्रीय तथ्यांक विभाग नै स्रोत हुन्छ । त्यस्तै मन्त्रालय, अनुसन्धानमा संलग्न संघसंस्थाहरूबाट पनि डाटा लिने काम हुन्छ ।
नेपालमा जीआईएस सिस्टमको सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
मलाई लाग्छ, अब नेपाल पनि जीआईएस सिस्टमभन्दा बाहिर रहेर काम गर्न सक्दैन । प्रक्षेपण गरिएको आर्थिक वृद्धि हात पार्न पनि जीआईएस एकदमै उपयोगी हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, पूर्वाधार, पर्यटन, कृषिदेखि सबै क्षेत्रमा जीआईएस प्रयोगको उच्चतम सम्भावना देख्छु ।
भौगोलिक विविधता भएको देशले नै जीआईएसको फाइदा लिने हो । विकास, समाज सुधार तथा सहजताका लागि यो सुविधा उपयोगी हुन्छ । म फेरि पनि भन्छु, नेपालमा जीआईएस प्रयोग गर्ने अथाह सम्भावना छ ।
जीआईएस सिस्टमको बढ्दो प्रयोग
विश्वव्यापी रूपमा विकास भएको सूचना–प्रविधिको विकासले विकसित मात्र नभएर विकासोन्मुख देशहरू पनि लाभान्वित भएका छन् । सूचना–प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्दै सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण कामहरू भौगोलिक सूचना प्रणाली जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टम (जीआईएस) प्रविधिमा जोड्ने प्रचलन बढ्दो छ ।
विकसित देशहरूले सूचना–प्रविधिको उपयोगलाई बढावा दिँदै सम्पूर्ण कामहरू एउटै स्थानबाट क्षणभरमा गर्न पत्ता लगाउन सक्ने सुविधा ल्याइसकेका छन् । त्यस्तै विकासोन्मुख देशमा पनि प्रविधिको प्रयोग बढ्दो रूपमा छ । नेपालमा पनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग र पहुँच दिनहँु बढ्दो छ । साक्षरता दर बढेसँगै सूचना–प्रविधिको पहुँच बढ्दै गएको हो ।
सरकारी कामलाई चुस्त–दुरुस्त पार्न जीआईएस सिस्टमले थप टेवा पु¥याएको छ । सूचना–प्रविधिको प्रयोगमा सरकारभन्दा निजी क्षेत्र अगाडि छ । जीआईएस सिस्टमको प्रयोगमा सरकार, इसिमोड, यूएन्डीपीलगायतले प्रयोगमा ल्याएका छन् । सरकारका तर्फबाट हेर्दा दैनिक संकलन हुने कर तथा कार्यालयका क्रियाकलाप वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि जीआईएस प्रविधि उपयुक्त हुन्छ । त्यस्तै पूर्वाधार विकास र तिनको अवस्था तथा पुनर्निर्माणलगायत विपद्का अवस्थामा जीआईएस सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुन्छ ।
अघिल्लो वर्ष गएको भूकम्पमा पनि जीआईएस सिस्टमको प्रयोग धेरै गरिएको थियो । जीआईएस प्रविधिबाट बनिसकेको प्रत्येक घरको अनुगमन गर्ने, तला थप गर्ने वा व्यावसायिक भवन निर्माणलगायतका सबै अध्ययन कार्यालयमै बसेर गर्न सकिन्छ ।
नेपालजस्तो भ्रष्टाचारको मुद्दा अत्यधिक पर्ने देशका लागि सेवा–सुविधालाई पारदर्शी र भरपर्दाे बनाउन तथा सहज पहुँचका लागि यो सुविधा प्रभावकारी हुन्छ । मानिसको दैनिकीमा सूचना–प्रविधिको बढ्दो प्रवेशले गर्दा जो–कोही पनि अब प्रविधिबाट टाढा रहेर जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
जीआईएस प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गरेको अवस्थामा सम्बन्धित कार्यालयमा सूचना–प्रविधिसँग सम्बन्धित दक्ष प्राविधिकको व्यवस्था र सरोकारवालाले पनि सूचना–प्रविधिबारे जानकारी राख्नुपर्नै हुन्छ । सहरी शासकीय क्षमता सुधार कार्यक्रम लागू गर्न पनि जीआईएसले सहयोग गर्छ । सरकारले पछिल्ला वर्षमा जीआईएस सिस्टमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
जीआईएस प्रविधिमा सरोकार पक्षलाई विश्वस्त पार्न भने समयसापेक्ष तथ्यांक अपग्रेड गर्ने र संकलित तथ्यांकमा ‘क्रसचेक’ गर्नु अर्काे चुनौती हो । जीआईएस सिस्टमले मोबाइलको गुणस्तर, बीटीएस टावर, पर्यटकीय क्षेत्रमा सेवा–सुविधा, होटल, बाटो, पानी, यातायात सुविधा, स्कुल–कलेजलगायतका सम्पूर्ण सुविधा एउटै ठाउँबाट पाउन सकिन्छ । देश संघीय संरचनामा जाँदै गरेको अवस्थामा जीआईएस सिस्टमको प्रयोग अझ बढ्ने निश्चित छ ।
जीआईएस इन्भायरोमेन्ट रिसर्च इन्स्टिच्युट) अग्रेन्द्र कुमार